ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: မနန်းအောင်ထွေးကြည် အိမ်ပြန်ခွင့်ရပြီ...
December 10, 2012 at 11:25pm ·
အမေ ရယ် .. နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ခွဲခွာခဲ့ကြရတဲ့ မြောက်ပိုင်းပြန်မောင်နှမတွေ
ရယ်..နဲ့ ပြန်ဆုံတွေ့ဖို့ ၅ ရက်သာလိုပါတော့တယ် ။
ကျမအပေါ် စာနာမှု့ များနဲ့အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို တွေးတောဆင်ခြင်
သုံးသပ်ပေးပြီး ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ။
၁၁ . ဒီဇင်ဘာ .၂၀၁၂
15Unlike · ·
You, Ko Lin Wai Aung, Kyawnaing Oo, Nicky Shein and 156 others like this.
Yuei Mon အစ်မကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ပြန်လာနိုင်ပါစေ
December 10, 2012 at 11:29pm via mobile · Like · 1
Arm Pee အပြီးပြန်လာတာလား.... ဒါမှမဟုတ် ခဏလား....Sis
December 10, 2012 at 11:29pm · Like · 1
Soe Moe အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ...
December 10, 2012 at 11:29pm · Like · 2
Nang Aung Htwe Kyi ခုတော့ .. ခဏပါ
Myo Myint Thwe ၀မ်းသာပါတယ် မမငယ် --- Welcome home ပါ
December 10, 2012 at 11:30pm · Like
Zstream Zin Ama, are u exciting? I wish to be happy reunited with your family n buddies!
December 10, 2012 at 11:30pm via mobile · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi ကျေးဇူး
December 10, 2012 at 11:32pm · Like
Ko Htay glad for youama nan !
Khin S Win မနန်းအစစအရာ၇ာအဆင်ပြေပါစေ
December 10, 2012 at 11:34pm · Like
Thu Zar Win ပြန်ရောက်ရင်အဆက်အသွယ်လုပ်ပါ၊
December 10, 2012 at 11:36pm · Like · 2
Hnynn Hnynn Aye Haveawonderful journey Home my friend!
December 10, 2012 at 11:38pm · Like · 1
Robert Hla Tun ကြိုဆိုပါတယ်
December 10, 2012 at 11:40pm · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi Hnynn Hnynn Aye .. St Augustine ကျောင်းသားဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲရှိတယ်.. တဲ့ .
December 10, 2012 at 11:41pm · Like · 3
Nang Aung Htwe Kyi Thu Zar Win .. နင်ခု ပြည်တွင်းမှာလား
December 10, 2012 at 11:42pm · Like
Phyo Mg Mg Win Glad to ahma.
December 10, 2012 at 11:42pm via mobile · Like · 1
Nannan Thiyi အမရဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီ အမဒီအချိန်ထိမတ်မတ်ရပ်နိုင်ခဲ့တာကိုလေးစားအားကျမိတယ် ဂဂုဏ်ယူပါတယ်အမ။
December 10, 2012 at 11:44pm via mobile · Like · 1
Htun Htun Oo အမ အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ခရီးစဉ်တလျှောက် အရာရာအဆင်ပြေ ချောမွေ့ ပြီး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်နော်။
December 10, 2012 at 11:46pm via mobile · Like · 1
Ye Lin Aung ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျား
December 10, 2012 at 11:47pm via mobile · Like · 1
Thu Zar Win အေး ဟုတ်တယ်။နင့် အိမ်ကိုငါလာခဲ့မယ်လေ။
December 10, 2012 at 11:48pm · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi လာခဲ့
December 10, 2012 at 11:48pm · Like
Nang Aung Htwe Kyi ချွန်ကိုပါပြောထားလိုက်
December 10, 2012 at 11:49pm · Like
Let's Work ၀မ်းသာပါတယ် ၊ ကိုယ့်အိမ်ယာမြေက ကိုယ်အိမ်ယာမြေပါဘဲ။
December 10, 2012 at 11:51pm · Like · 1
Thu Zar Win Ok
December 11, 2012 at 12:00am via mobile · Like
Min Thein Kyaw ၀မ်းသာပါတယ်။ အိမ်ဆိုတာ အကောင်းဆုံးနေရာပဲ။
December 11, 2012 at 12:25am · Like · 1
Hnynn Hnynn Aye Aung Htwe & Baby (Thu Zar Win), please attend and enjoy the St. Augustine Saya Gadawt Pwe and old students’ reunion on my behalf. It will be held in January every year. Although, I really want to meet you all in this occasion, I’ll be in Goa for this Christmas and New Year holiday. Then I’ll be stuck in India till the end of March, 2013. So I’ll miss this occasion again. Please say Hello to all of our friends and give my respect to all our beloved teachers.
December 11, 2012 at 12:27am · Like · 3
Min Thein Kyaw ရှေ့ဆက်ပြီး မိသားစုတွေနဲ့အတူ ကိုယ်အသက်ပေး ချစ်တဲ့ အမိမြေမှာ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင် ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
December 11, 2012 at 12:33am · Like · 2
July Mg ဟယ် ..တကယ်
December 11, 2012 at 1:22am · Like
Thauk Kyar Kyal Ti nge will go back ur home?? good!!! home sweet home!
December 11, 2012 at 1:28am · Like · 1
Mel Zar Taung နောက်စိကိုကျည်မှန်သေသွားတဲ့ မျိုးဝင်း နဲ့ကော မတွေ့ချင်ဘူးလား
မြေကြီးထဲကဆွဲထုတ်ပြီး ဖိနပ်နဲ့ပါးရိုက်ပြီး မေးလိုက်ပါ့လား
December 11, 2012 at 2:07am · Like · 1
Win Min San ချစ်သော အမိမြန်မာပြည်မှ ထာဝရ Warmly Welcome ပါ မြောက်ပိုင်းမြေမှ သံမဏိမယ်..
December 11, 2012 at 2:28am · Like · 2
Min Thant Aung င်္မြန်မာ ပြည်သူတွေက သပြေညိုအောင်ပန်းတွေနဲ့ လှမ်းလို့ ကြိုဆိုလျက်ပါ။
December 11, 2012 at 2:34am · Like · 1
Moe Lay နေကောင်းအောင်နေပါ။ ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါ။ အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ပါ။
December 11, 2012 at 2:48am · Like · 2
Zaw Zaw Naing အစစအရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့ ပါစေမငယ်..
December 11, 2012 at 3:10am · Like · 2
Aung Aung Myin ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။ ကြိုဆိုပါတယ်။ အရာအားလုံးကိုလည်း ပြေလည်စေချင်တယ်။
December 11, 2012 at 3:18am · Like · 2
Aye Aye Thu မငယ်ရေ....ဝမ်းသာလိုက်တာ။ St.Augustine ကျောင်းသားဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပျော်စရာကြီးနော်။
December 11, 2012 at 5:28am · Like · 1
Ti Lay ကြိုဆိုနေတယ်အရမ်းဝမ်းသာတာဘဲအောင်ထွေးရေ
December 11, 2012 at 5:53am via mobile · Like · 2
Thant Zin Glad that u can go home n meet with family。understand that u gonna be busy at Rg but pls tale time to spend with family especially with Aunty。u shld make press conference there n pls say thanks to Ma May Thingyan who wrote articles concern with NB 。Hope to meet u one day at somewhere in near future。 Pls send some articles if u make press conference at Rgn 。
GANBATTE Kudasi ne。頑張ってください。
December 11, 2012 at 6:59am via mobile · Like · 1
KhinMuyar SoeMyint ညီမရဲ့ အကြောင်းတွေကိုအခန်းဆက်နဲ့ အမအမြဲတန်းဖတ်ခဲ့ တာပါညီမနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်အမဖတ်နေတာလဲအခန်း၁၅ ကိုဆရာတော်ဦးဇဝနတင်လို့ ဖတ်ရတာပါညီမဘဝအမြဲတန်းစိတ်ချမ်းသာပါစေအရာခပ်သိမ်းအောင်မြင်ပါ
December 11, 2012 at 7:27am via mobile · Like · 1
Zar Ni When you comeback to Ausi ?
December 11, 2012 at 9:00am · Like
Zar Ni Do you want to stay live in Myanmar?
December 11, 2012 at 9:01am · Like · 1
Ko Lay ခရီးလမ်းကြောင်း ဖြောင့်တန်းသယာပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေ။ သတိကိုတော့ မမေ့ပါနဲ့။
December 11, 2012 at 12:36pm · Like · 2
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး အကိုကျော်နိုင်ဦး(ကိုကြောင်)တော့ အစီအစဉ်ဆွဲနေလောက်ပြီ... ဟား ဟား . . . ။
December 11, 2012 at 3:24pm · Like · 3
Khin Maung Htun မငယ် မန်းလေးရောက်ရင်တွေ့မယ် အမ
December 11, 2012 at 4:13pm via mobile · Like · 1
Sean M Gah Dome Welcome back from Yangon but be careful........
December 11, 2012 at 5:50pm · Like · 1
Myat Ko အစ်မ အခု ဆမားညီညီ ဖတ်နေတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ပါချောင်ရောက်နေသလိုပဲ
December 12, 2012 at 1:47am · Like
Zaw Win Htut You are warmly welcome Ma Ma Gyi and I want your courage 1% sister!
December 16, 2012 at 8:49am · Like
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 3:57 PM